Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က Wagon တာဝန်ပေးအပ်ပညာရှင်များ၏အာရုံကိုမှ
01 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က 0
SY မှပေးအပ်သောလှည်းနည်းပညာရှင်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် Wagon Technician အသတ်မှတ်ရေးများ၏အာရုံကိုမှ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအတူ 2019 / 1 KPSS Center ကတာဝန်!
စိတ်ပညာန်ထမ်းများနှင့်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များ updated မှလျှောက်ထားကြောင်း TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို; ကနျြးမာရေးကော်မတီကအစီရင်ခံစာ၏လိုအပ်သောသက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါတယ်။
1-မျက်လုံး, နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း, Internal Medicine, အထွေထွေခွဲစိတ်ကုသမှု, အရိုးအထူးကုနှင့် Traumatology, စိတ်ရောဂါကုသမှု, Neurology, နှလုံးရောဂါဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးများ၏လက်မှတ်နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းရှိရမည်။ သင်တို့သည်လည်းအသေးစိတ်အတွက် audiometry နှင့်နားရွက်၏တန်ဖိုးရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
4-scan ကစမ်းသပ်မှု (မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်ရလဒ်ကိုနှိုးဆွခြင်းနှင့်အပျက်သဘောရမည်ဖြစ်သည်)
(သူအများအပြားမီတာထံ၌ကြားရစင်ကြယ်သောသေံ audiometry ပျမ်းမျှအားတိုးတိုးလေး၏ရလဒ်ကဲ့သို့) 5-ကြားအာရုံစစ်ဆေးခြင်း
အသွေးတော်စမ်းသပ်မှုတွေ 6-အသေးစိတ်ရလဒ်များကို (ပြည့်စုံသောအသွေးကိုစိစစ်-AST-ALT နဲ့ GGT-ယူရီးယား-Creatinine-Hbs Hbs Ab-ဧပြီ-HIV ပိုး-HCV-T3-T4-T5H)
7-အမြင့်, အလေးချိန်, BMI, သွေးဖိအား, ရင်ဘတ်က X-ray အဆုတ် function ကိုစမ်းသပ်မှုများ, urinalysis
ဆုံးဖြတ်ချက်-အစီရင်ခံစာ "၏ 8 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ဦးနည်းပညာရှင်အဖြစ် Wagon Works, အုပ်စုတစ်စု B ကိုအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်"ဒါဟာအရပျကိုယူသင့်ပါတယ်။
အရေးကြီးမှတ်ချက်: စာရင်းထဲတွင်ဖော်ပြထားသောဆေးရုံကနေအခြားဆေးရုံထံမှလက်ခံရရှိအဆိုပါအစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ !!!
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က Wagon တာဝန်ပေးအပ်ပညာရှင်များ၏အာရုံကိုမှ 01 / 03 / 2019 တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် Wagon Technician အသတ်မှတ်ရေးများ၏အာရုံကိုမှ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအတူ 2018 /2KPSS Center ကတာဝန်! ယခုနှစ်အဖြစ် 2019 TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို 's ကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်ပြောင်းလဲသွားတယ်သည်အသစ်ကလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ, ကနျြးမာရေးကျောမတီတှငျအခြို့ချို့တဲ့အသစ်ခန့်အပ်ထားသော Wagon Technician ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရာမှအစီရင်ခံစာမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများသည်အထိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ပူးတွဲပါစာရင်း, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထား၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုများ၏အမည်များကြင်နာစွာလူ့အရင်းအမြစ်များဦးစီးဌာနမှတင်သွင်းဖို့မေတ္တာရပ်ခံနေကြတယ်ဆန့်ကျင်ဘက် mail ဖြင့်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး 08.03.2019 အတွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်ဖြည့်စွက်ရန်။ (အသစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့အစီရင်ခံစာဝယ်ယူရန်မလိုပါသာလျှင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုစေလွှတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူလုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်ထံမှစာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိခံရဖို့။ ။ ) စာရင်းတစ်ခုလိပ်စာများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: TCDD ...
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏လူမှုရေးန်ဆောင်မှုများဥပဒေ Assigned အလားအလာများ၏အာရုံကိုမှ 26 / 12 / 2018 ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကိုအောက်တွင်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်မှာ AS န်ထမ်းမှတာဝန်ပေးအပ်ခံရဖို့ထိုက်ခွင့်နေသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့်လိုအပ်သောလူမှုရေးန်ဆောင်မှုများဥပဒေအမှတ် 2828 TCDD ပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်း scope ။ 1) ကနျြးမာရေးကော်မတီအစီရင်ခံစာ (အပြည့်အဝစုံတဲ့အစိုးရပိုင်ဆေးရုံများသို့မဟုတ်တာဝန်ရှိသူတဦးတက္ကသိုလ်ဆေးရုံကျန်းမာရေးကော်မတီအစီရင်ခံစာ) 2)2အရေအတွက် Notarized ဒီပလိုမာဥပမာ (ပို့ဆောင်ရေး Inc မှခုနှစ်တွင်မူရင်းဒီပလိုမာ၏လကျအောကျခံ၏ဒီပလိုမာမိတ္တူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် TCDD အခွင့်အာဏာကအတည်ပြုခံရဖို့လုံလောကျပါလိမ့်မယ်။ ) 3) မှခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် (သူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းပွုပါပွီသောသူတို့အဘို့)2အရေအတွက် discharge လက်မှတ်သို့မဟုတ်စစ်တပ် status ကိုလက်မှတ် (ရွှေ့ဆိုင်းလုံခြုံသောသူတို့ကိုမ) (သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် e-အစိုးရစနစ်ကနေရရှိနိုင်တဲ့) (မွေးဖွားလက်မှတ်၏ 4)2အရေအတွက်လက်မှတ်မွေးဖွားခြင်းလက်မှတ်ကိစ္စ ...
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ Cankes ဦးစီးဌာန၏ဦးခေါင်းမှတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်လက်ထောက်ဌာနမှူး Bayraktutan Oktar လညျပတျခဲ့ 06 / 02 / 2018 Cankes သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Memur-Sen ဥက္ကဋ္ဌ, လက်ထောက်ဌာနမှူးŞehmuz Oktar ဖို့တာဝန်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc မှကားစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကားစောင့်ရှောက်မှုဦးစီးဌာနမှဥက္ကဋ္ဌ Mehmet Bayraktutan ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုပိုကောင်းဆန္ဒကိုရယူသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌ, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် Umit Aydin တူရကီဌာနခွဲဒုတိယသမ္မတ Noli3Oguzhan Dogan ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်သည်အထိ views Cankes ။
KPSS 2017 /2တာဝန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ '' အာရုံစူးစိုက်မှုအနည်ထိုင်ဖို့ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကရလဒ်များ 07 / 12 / 2017 TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကရက်စွဲ 22.12.2017 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုသည်အထိအခြေချ အမည်ခံ၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနမှအထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်အရွက်အညွသို့မဟုတ်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ-Izmir-Sivas-Malatya-Adana-Afyonkarahisar မော်တော်ကားစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုထားသောစာရွက်စာတမ်းများလုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်သုတေသနမော်ကွန်းတိုက်ဖို့ကိုနှိပ်ပါဖွဲ့စည်းရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်အာရုံစိုက်ဖို့တာဝန်ရှိသူများ၏ဥပဒေအမှတ် 3713 19 / 03 / 2018 3713 ဥပဒေ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ် 19 ဖို့တာဝန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏တာဝန်ကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အောက်ကဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ထားရန်မလိုအပ် - မတ်လ 30 နေ့စွဲ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကအထွေထွေလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနသို့မဟုတ်အစ္စတန်ဘူလ်၏ညွှန်ကြားမှု, တူရကီ, Izmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyon ဒေသကြီးအကြား 2018 သူတို့ကဦးစီးဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူးမှလူတစ်ဦးအတွက်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသည် 1) ကနျြးမာရေးကော်မတီအစီရင်ခံစာ (အပြည့်အဝစုံတဲ့ပြည်နယ်ဆေးရုံသို့မဟုတ်တရားဝင်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ) 2)2အရေအတွက် Notarized ဒီပလိုမာဥပမာ (ပို့ဆောင်ရေး Inc မှခုနှစ်တွင်မူရင်းဒီပလိုမာ၏လကျအောကျခံ၏ဒီပလိုမာမိတ္တူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် TCDD အခွင့်အာဏာကအတည်ပြုခံရဖို့လုံလောကျပါလိမ့်မယ်။ ) 3)2အရေအတွက် ဥပမာအားက Secondary School တွင်ဒီပလိုမာ ...
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ Cankes ဦးစီးဌာန၏ဦးခေါင်းမှတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်လက်ထောက်ဌာနမှူး Bayraktutan Oktar လညျပတျခဲ့
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်အာရုံစိုက်ဖို့တာဝန်ရှိသူများ၏ဥပဒေအမှတ် 3713
ထိုအခါ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကရထားစက်လုပ်သမားသင်တန်းအမှတ်စဥ်ကြေညာချက်
မီးရထားပို့ဆောင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (အီးယူစီမံကိနျး၏အတိုင်းအတာအတွင်းမှာတူရကီအတွက် Intermodal ပို့ဆောင်ရေးအာူး)